Orinasa mikorontana taratasy famokarana masinina any China sy ny mpamatsy | Masinina manankarena
Ity masinina ity dia mandray ny fitsipiky ny tsy fahampian-drano, izay manadio ny sarimihetsika plastika (sarimihetsika plastika, mulch film fambolena, kitapo tenona PP, kitapo hoditra bibilava, kitapo habakabaka, kitapo taonina, plastika fako plastika manify) Fitaovana fanosehana ny rano ao anaty plastika.
Barila milina 1.squeezing tsy ilaina amin'ny fitsaboana amin'ny 38Crmoal, satria ny ampahany fricton dia eo an-doha.
2. famolavolana milina fantsom-baravarankely, eo amboniny, ny barika dia handavaka lavaka kely kokoa. Lavaka anatiny manodidina ny 3mm, ivelany manodidina ny 6mm
3. ankoatry ny barika masinina manenjika dia manana 5 pcs Keyway, (karazana 300 ny sary, manana 6 pcs Keyway),
4. ny milina mametaka Screw fitaovana tsy maintsy amin'ny 38Crmoal, avo lenta, fanoherana tsara abrasion.
Famolavolana visy milina 5.squeezing ataon'ny TWO-IN-ONE, amin'ny vidiny ambany indrindra.
6. ny lavaka bobongolo ny milina manenjika dia azo ovaina
Masinina mametaka kitapo PE